Inona no atao hoe Othello Syndrome | Bezzia
Inona no atao hoe Othello Syndrome?
Othello syndrome dia manondro toetra amina lalaovin'ny mpanoratra anglisy Shakespeare. Io toetra io dia nampiavaka ny fijaliana noho ny fahasaro-piaro, nahatonga azy hieritreritra ny tsy fivadihan'ny vadiny amin'ny fotoana rehetra. Araka ny antenaina, ny olona izay voan'io aretina io dia mahatonga ny fifandraisan'izy ireo hanjary tsy hahomby ary ny fiaraha-miaina eo amin'ny roa tonta dia tsy maharitra.
Tena olana amin'ny mpivady io satria lasa poizina ny fifandraisana. Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hiresaka bebe kokoa momba ity karazana sindromina ity sy ny fiantraikan'izany amin'ny mpivady amin'ny fomba ratsy isika.
1 Inona no aretina Othello noho ny
2 Fambara ny soritr'aretin'ny Othello
Inona no aretina Othello noho ny
Mazava fa ny olona mijaly amin'ny othello syndrome dia manana fahalemena eo amin'ny sehatry ny saina. Ho fanampin'izany, misy andiana antony na antony mahatonga anao hijaly karazana fialonana toy izany: fiheveran-tena ho ambany, fiankinan-doha lehibe amin'ny mpiara-miasa ary tahotra be loatra sao ilaozan'ny olon-tiana ary avela irery.
Ilay olona manana izany karazana fialonana izany dia mety hiaritra karazana fikorontanana maro karazana toy ny mety ho tranga aretin-tsaina manery anao na aretina hafa karazana paranoida. Etsy ankilany, heverina ihany koa fa ny fialonana toy izany dia mety vokatry ny fanjifana zava-mahadomelina be loatra izay manimba sy manimba ny vatana toy ny alikaola na zava-mahadomelina.
Fambara ny soritr'aretin'ny Othello
Araka ny efa noresahintsika tetsy ambony, ny olona mijaly amin'ity sindromina ity dia fialonana am-pitiavana sy tsy mahasalama ny sakaizany. Ity karazana fialonana ity dia hanana toetra telo miavaka:
Tsy misy tena antony maninona no tokony hamboarina ny fialonana toy izany.
Fiahiahiana tafahoatra sy tafahoatra ny mpiara-miasa.
Tsy mitombina mihitsy ny fihetsika ary tsy misy dikany.
Raha ny momba ny soritr'aretin'ny olona saro-piaro dia tokony hasongadina ity manaraka ity:
Manome fifehezana tafahoatra ny vadinao. Mihevitra izy fa tsy mahatoky amin'ny fotoana rehetra ary izany dia mahatonga azy ho mailo hatrany.
Tsy manaja ny tsiambaratelo sy ny toerana misy anao ianao. Tokony ho fantatrao amin'ny fotoana rehetra ny ataon'ny vadinao. Misy fiatraikany ratsy eo amin'ny fifandraisan'izy ireo ara-tsosialy izany.
Mazava ny andro ny ompa sy ny kiakiaka. Izany rehetra izany dia mitarika herisetra mety ho ara-batana na ara-tsaina.
Tsy misy toerana ho an'ny fihetsem-po na fahatsapana tsara. Ara-dalàna raha tezitra sy tezitra mandritra ny andro ilay olona saro-piaro. Tsy faly amin'ny mpiara-miasa aminy izy, satria miankina amin'ny fiankina bebe kokoa.
Raha fintinina, zava-dehibe ny fitsaboana haingana io karazana sindika io. Ilay olona saro-piaro dia mila ny fanampian'ny matihanina, hanampiana azy hahita fa tsy afaka manana fifandraisana amin'ny olona iray hafa amin'ny fomba misy poizina ianao. Raha tsy mamela ny tenany hotsaboina ilay olona na tsy maharesy ny olan'ny fialonana, dia manjary tsy mahomby ilay fifandraisana. Ny fifandraisana dia tokony hiorina amin'ny fanajana tanteraka sy fahatokisan'ny roa tonta. Ny fialonana ara-pitondran-tena dia tsy azo avela amin'ny fifandraisana, satria hiafara amin'ny fanimbana azy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » Psychology » Inona no atao hoe Othello Syndrome?
Voan'ny blancorexia ve ianao? Ny faniriana hanana nify fotsy